बस ड्र्राइभर सुजन गुरूङले शिशिर भण्डारी मार्फत रचनासँग गीत गाउने अवसर पाएपछि यसरी फेरियो जिन्दगी! टिकटकमा भाइरल (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > बस ड्र्राइभर सुजन गुरूङले शिशिर भण्डारी मार्फत रचनासँग गीत गाउने अवसर पाएपछि यसरी फेरियो जिन्दगी! टिकटकमा भाइरल (भिडियो सहित)
admin October 7, 2020 भिडियो, मनोरञ्जन	0
एजेन्सी । सिन्धुपाल्चोकका सुजन बाबु गुरुङको जीवन केहि दिनअघिसम्म सामान्य थियो । आफ्नो गाउने कलालाई दबाउँदै उनी दैनिक बुढानिलकण्ठ रत्नपार्क रुटको गाडी चालकको रुपमा आफ्नो जीविको चलाउँदै थिए । त्यसैबिच २३ बर्षका सुजनको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आयो, जब उनको बारेमा थाहा पाएर कलाकार सँचारकर्मी शिशिर भण्डारी उनको प्रतिभाको भिडियो बनाए । समाचारकाे भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्***
११ बर्षको उमेरमा गरिवीले पिरोलेपछि काठमाडौंमा आएर अनेकौं सँघार्ष गरेका सुजनको जीवन कथाले सबैलाई रुवायो र उनको कलाले सबैको मन लोभ्यायो । सबैको माया पाएपछि शिशिरले पहिलो अन्तर्वार्तामै गरेको बाचा पुरा गरे ।
उनले सुजनको गीत रेकर्ड गराए र भिडियो सहित बजारमा ल्याए । अहिले गीतको चौतर्फी चर्चा छ । सबैले गीतको शव्द र सँगीत सँगै गायक गायिकाको आवाजको तारिफ गरेका छन् । सुजन सँगै रचना रिमालले गीत गाएकी छिन् भने शिशिर भण्डारी आफैले शव्द र सँगीत भरेका छन् ।
आफ्नै श्रीमतिलाई उनकै प्रेमीसंग बिहे गराईदिने अचम्मका श्रीमान ! (भिडियो हेर्नुस्)
अशोककाे घरमा भएकाे लफडा सुल्झाउन गएका टंकका दार्इ टिका बुढाथोकी छिमेकिहरूसँग भयो यस्तो बबाल – भिडियो
बिदेशबाट फेरि बाहिरियो चेलीको हेर्नै नसकिने यस्तो क्रियाकलापकाे भिडियो! (भिडियो सहित)
सार्वजनिक स्थलमै देखियो यस्तो दुःखद दृश्य, जस्ले बनायो भावुक (भिडियो सहित)